Ogaden News Agency (ONA) – Saraakiil Ciidanka Gumaysiga Kagoostay & Khal Khalkii Oo Siibatay.
Saraakiil Ciidanka Gumaysiga Kagoostay & Khal Khalkii Oo Siibatay.
Posted by Dulmane	/ July 1, 2016
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Tigree ee woqooyiga wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in ay ciidanka gumaysigu niyad jab wayn kala kulmeen halkaas, sida aan xogtan kuhelay xukuumada TPLF ayaa bilihii lasoo dhaafay ciidamo aad utiro badan udaad gureeyay woqooyiga Itoobiya khaasatan dhulka ku dheeraran xuduuda Itoobiya iyo Eritrea si ay isugu diyaariyaan dagaal ay doonayaan in ay Eritaria lagalaan.
Sida warku sheegayo waxaa isku dhexyaac wayn uu kajiraa gudaha ciidamada gumaysiga Ethiopia ee kusugan magaalooyinka Humara, Sitit, Humara, Gunana, iyo Umahijaar. Oo dhamaantood kuyaala woqooyiga Gobolka Tigrey, isku dhexyaacan ayaa yimid kadib markay ciidanka gumaysigu Magaalooyinka lageeyay kawaayeen soo dhawayn xaga shacabka ah isla markaana ay culays badan oo dhinaca ciidamada Eritrea ee xuduuda kusugan la kulmeen.
Xogtan oo aan kahelay ilo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaysa in ay ciidanka gumaysigu Itoobiya kagoosteen saraakiil magac kulahaa gudaha ciidanka wayaanaha waxaana saraakiisha goosatay kamid ahaa Dhajane Tilahun oo katirsanaa qaybta 24aad oo kahowl gasha galbeedka Gobolka Gonder iyo waliba galbeedka Gobolka Tigrey waxaana lasheegayaa in uu Dhajane Tilahun ahaa sargaal sare oo kamid ah hogaaminta ciidamada waxaana loobadinayaa in uu ugalay jabhadaha la dagaalama ciidanka wayaanaha.
Sidoo kale waxaa saraakiisha ciidanka gumaysiga Ethiopia kagoostay kamid ah Bakur Gabresilase iyo waliba qaar kale oo kamid ahaa ciidankii uu hogaaminayay wuxuuna Bakur Gabresilase sheegay in uuna u adkaysan karin waji xumada ay kala kulmeen deegaanada ay kahowl galayeen isagoo xusay in waji gabaxa ay udheertahay cabsi badan oo kaga imanaysa ciidamada Eritrea ee xuduuda kusugan.
Dhinaca kale xogtan aan kahelay ayaa muujinaysa in saraakiisha ciidamada gumaysiga Ethiopia ugu saraysa ayna wax mooraal ah u haynin dagaalka ay xukuumada wayaanuhu qorshaynayso waxayna saraakiishu arintaas sabab uga dhigeen iyagoo goboladii ay kasoo jeedeen lagu laynayo shacabkii kudhaqnaa waxayna muujiyeen sida ay u adagtahay nin aabihii laxidhayo in uu dagaal galo.
Dadka ku xeeldheer dhinaca arimaha milatariga ayaa sheega in ayna xukuumada TPLF haynin wax ciidan ah oo mooraal uhaya dagaalada daandaansiga ah ee xukuumada wayaanuhu ku doonayso dhul balaadhsiga waxayna khuburadan dhinaca ciidanka ah leeyihiin waxaa gabaabsi ah dhamaan arimaha aas’ aasiga ah ee ciidanka Itoobiya waxayna leeyihiin mahaystaan dhaqaale ama mooraal ay kusii fuliyaan arimahooda ciidan.
Dhinaca kale dowlada Eritaria ayaa u diyaar garaysan weerar kasta oo dhinaca Ethiopia kaga yimaada waxaana heegan kujira dhamaan qaybaha kala duwan ee ciidamada haday noqon lahayd cirka iyo haday noqon lahayd ciidanka dhulkaba.
Sikastaba ha ahaatee waxaa maalinba maalinta kadambaysa isasoo taraya kala yaaca xukuumada TPLF haday yihiin kuwa arimaha milatariga ka shaqeeya iyo waliba kuwa arimaha siyaasada kashaqeeya.